Iisaveyi zemveli zivaliwe, uyadika, zisuswe kwi ubomi. Ngoku buza imibuzo siyamiliselwa ebomini, luvuleleka, kwaye mnandi.
Isakhelo imposiso Uphando iyonke ikhuthaza abaphandi ukuba ucinge uphando uphando njengenkqubo yinxalenye ezimbini: kukuqesha abaphenduli yaye ebabuza nemibuzo. Kwicandelo yangaphambili ndathetha ubudala yedijithali kuyitshintsha njani indlela ukugaya abaphenduli, kwaye ngoku ndiza kuthetha ngendlela ubudala yedijithali lwenza iindlela ezintsha ukubuza imibuzo. Ezi ndlela zintsha zingasetyenziswa kunye nokuba iisampulu wokuqashisela okanye iisampuli non-ezinokwenzeka.
A imo Uphando okusingqongileyo apho imibuzo ebuzwa, yaye oko kunokuba neempembelelo ebalulekileyo ulinganiso (Couper 2011) . Xa ixesha lokuqala lophando survey imo ixhaphakileyo ubuso-ngobuso, kwaye ngeliya xesha localu yesibini kwimowudi ixhaphakileyo ngomnxeba. abaphandi abaninzi ukujonga ixesha wesithathu uphando uphando njengoko ulwandiso nje ngeendlela uphando ukubandakanya iikhompyutha neeselfowuni. Noko ke, kwiminyaka lwedijithali ngaphezu nje utshintsho imibhobho apho imibuzo neempendulo iqukuqele. Endaweni yoko, utshintsho ukusuka analogu digital yenza-mhlawumbi uza kufuna-abaphandi ukutshintsha indlela sicela.
Uphononongo Michael Schober noogxa ibonisa iingenelo yokulungelelanisa kucela ukuba elinakho kunye nezithethe zoluntu malunga ubugcisa obutsha (Schober et al. 2015) . Kuphononongo, Schober noogxa kuthelekiswa iindlela ezahlukeneyo ngokubuza abantu imibuzo ngefowuni. Athelekisa iincoko ilizwi, eya kuba inguqulelo yendalo isondela era yesibini, ukuba ukuqokelela idata ngokusebenzisa imiyalezo emininzi, nokusondela akukho umzekelo ezaziwayo. Schober kunye nabo bafumana ukuba imiyalezo kwakhokelela data ezikumgangatho ngaphezu ndlebe ilizwi. Ngamanye amazwi, ukudlulisa nje iindlela ezindala kwi ubugcisa obutsha asinguye ndlela ilungileyo. Kunoko, abaphandi kuya kufuneka ngokusesikweni iindlela zethu ecela ukuba la maqonga ezintsha.
Kukho zokuchitha- ecaleni apho nabaphandi bahlele iintlobo zophando, kodwa Eyona nto ebalulekileyo ngeendlela uphando ubudala yedijithali kukuba-zilawulwa computer, kunokuba dliwano-zilawulwa (as in ngomnxeba kunye nophando ubuso-ngobuso). Ukuthatha udliwano- ndlebe zabantu ngaphandle inkqubo yokuqokelelwa kwedatha unika iinzuzo ezinkulu kwaye lazisa ezinye iingxaki. Ngokwemiqathango nenzuzo, bekhupha udliwano- ndlebe kakhulu kunciphisa iindleko-ndlebe ungomnye iindleko ezinkulu uphando uphando-yaye kwandisa bhetyebhetye; abaphenduli inxaxheba xa befuna, kuphela xa dliwano iyafumaneka. Nakuba kunjalo, ukususa obuza imibuzo kwakhona umda uphando ngeendlela ezithile. Ngokukodwa, udliwano- ndlebe zibaluleke kakhulu zokukhuthaza abamangalelwa inxaxheba ukubagcina inxaxheba ngexesha slogging kuphando elide maxa udiniwe.
Okulandelayo, ndiza uchaze iindlela ezimbini ebonisa indlela abaphandi anokulixhakamfula izixhobo ephakade yedijithali ukubuza imibuzo eyahlukileyo: yokulinganisa States yangaphakathi ngexesha elifanelekileyo kakhulu kwaye kwenziwa eziphilayo uvavanyo okwexeshana (Section 3.5.1) kunye edibanisa amandla imibuzo uphando open-laphela kwaye kufutshane-ended kuphando wiki (Icandelo 3.5.2). Nangona kunjalo, eli nyathelo lisingise-zilawulwa computer, bezibuza Abazobi iya kuthetha ukuba kufuneka uyile ngeendlela zokubuza ukuba mnandi kakhulu ngenxa nxaxheba, inkqubo ebizwa gamification (Icandelo 3.5.3).